अप्रिय अंक १००० ।
आत्मा ,पशुपतिनाथ र १००० अंक । जन्मेसँगै नछुट्टिने नातो लगाएको मृत्‍यु आज घुमिरहेको छ ६०८ न. क्याबिन वरपर । यमपास लिएर कुरिरहेका जस्तो लाग्छन् यमदुतहरु । द्वन्द चलिरहेको छ डाक्टर र यमदुतहरुको बीचमा । जित्ने प्रयासमा दुबै तत्पर देखिन्छन् । दया नभएका दूतहरु कुनै कसर छोड्ने संकेत देखिँदैन । केही दिन देखि समस्या उत्पन्न भैरहेका छन् खड्गको शरीरमा । नाम मात्र खड्ग । ब्यवहार भने शान्त क्रोधबिहीन । अङ्रेजीमा भन्नुपर्दा ” क्युट “ । तर शरीरमा रोग भने खड्गस्वरुप । भैरवस्वरुप । उछिट्टो खन्ने । रक्त क्यान्सरको रोग । रक्तकोषिकाहरु बिकृत भएको अवस्था । ती सबै आफ्नो बोनम्यारोको सन्स्कार भुलेर स्वच्छ्न्द भएको अवस्था । धेरै स्वच्छन्द किन भएको होलान् तिनीहरु ? ति रक्तकोषिकाहरुले आफ्नो संंस्कार भुलेर निकै दु:ख दिन्छन् शरीरलाई । उमेर छँदै कति छिटो जवानी चढेको होला ! मात्र ४४ बर्षको उमेरमा अराजक ति बदमास निर्लज्ज रक्तकोषिकाहरु बिक्रित भएका छन् । तीन दाजुभाइ कोषिकाहरुमा सेतो रक्तकोषिकाले पुरै बदलामा आन्दोलन गर्‍यो नबढ्ने । बाहिरबाट जति चढाएपनि संख्या ज्यूँका त्यूँ ।
Make your destiny. Or else someone will hire you to make theirs.
देवघाट ,पेरिस, प्रिय साथी र म ।
देवघाट ,पेरिस, प्रिय साथी र म । आकाश त शून्य हुन्छ भनिन्छ । कुनै सिमा पनि हुँदैन आकाशको । वायुमण्डलका पत्रहरु भने हुन्छ भन्छन् वैज्ञानिक । पराबैजनी किरणबाट सुरक्षा दिने पनि पत्र हुन्छ । ओजोनको पत्र । औधोगिक क्रान्तिसँग नष्ट हुँदै गएको त्यो अभागी पत्र हो । धर्ती त्यसको पीडित पात्र । र मनुष्यजाति त्यसको एक मात्र दोषी पात्र। दसैंको टिकाको दिन देवघाटको लागि प्रस्थान गरेको थिएँ । चितवन पुग्न ५ घण्टा लाग्यो । यस्तो लाग्यो बसमा केवल ब्रेक मात्रै छ । यसलेरेटर छैन । हाम्रो देशको विकासको गाडीजस्तो । पूरै निरस यात्रा । त्यहाँ पुग्दा बेस्मरी पानी परिरहेको थियो । मुसल्धारे पानी । पानीले सबैलाई पिटिरहेको थियो । भर्खर पिच गरिएको बाटोलाई । त्यही बाटोमा हिँडिरहेका कार ,अटो रिक्सा आदिलाई । मसँग त्यो शक्ति सहने क्षमता थिएन । त्यसैले म ओत् लागेँ एउटा औषधी पसलको छनोमुनि । त्यसैगरी धेरै जना निरिह थिएँ । म मात्र एक्लै नभएकोमा खुशी पनि लाग्यो । मनुष्य स्वभाव । दु:खमा पर्दा अरु पनि दुखी देख्दा आफ्नो मनले आड पाउने । नभए त सुखमा कहाँ अरुलाई खोजिन्छ र !
साइतका बिरामी । आजसम्म बिहान उठेर नित्य कर्मस्थलमा जान मन नलाग्ने दिनहरु धेरै भए । बिरक्त लाग्दा दिनहरु । मन भए पनि नभएपनि जानु त छ नै । त्यही मानिसहरुको भिडमा । यो कुनै हाट बजारमा लाग्ने भिड भने हैन । मेला पनि हैन । यो सबै दुखी मनहरुको भिड हो । नेपाल भरीका पीडित शरीर र मनहरुको केन्द्रबिन्दु । शरीर थला परेपछि मात्रै पुगिने ठाउँ । जीवनमा कहिल्यै जान नपरे भाग्यमानी भइने ठाउँ । त्यो हो अस्पताल एमर्जेन्सी । सबैका निम्ती आफ्नै बिरामी एमर्जेन्सी । दुई चार दिन एमर्जेन्सी कक्षको बास प्राय् ९० प्रतिशत बिरामीका कथा होलान् । भर्ना हुन कुर्नुपर्ने हुँदा कतिजना हार खाने ठाउँ । कति यस्तै रहेछ भनेर पचाउने ठाउँ । कतिजना कहिले रहेछ भर्ना गर्ने भनेर अचम्मित पर्ने ठाउँ । कति एक दिन त पालो अाउला भन्दै आश गर्ने ठाउँ । कति बाठाजनहरु गोरु बेचेको नातो लगाएर भन्सुनको प्रयास गर्ने ठाउँ । कतिजना सेतो कोट लगाएका सबैलाई झन्झट नै लाग्ने गरी भर्ना कहिले भन्दै सोध्ने ठाउँ । सबैजनाको एउटै उत्तर “ बेड खाली भएपछि ” । त्यतिन्जेल सम्म एउटै बेड्मा तीनजना मिलेर बस्नुपर्ने बाध्यता
धनको मुहार देख्ने डाक्टर ।
धनका मुहार । जीवन एक भोगाइ हो । कथा सबैका फरक छन् । समग्रमा भने समस्या एउटै हुन सक्छ । प्रचुर कथावस्तुले घेरेको चिकित्सा जीवन र पेसामा हरेक दिन एउटा फरक कथा भेटिन्छ । सबै प्रकारका कथा । स्वास्थ्य समस्याका कथा । त्योसँग जोडीएको सामाज र अर्थ बिज्ञानका कथा । रहरले अस्पताल प्रबेश गर्दैन कुनै मनुश्य । आँफै बिरामी कि त आफन्तजन बिरामी भएर नै प्रबेश गर्ने हो । अस्पातलको बातावरणमा दु:खको भाव प्रचुर हुन्छ भन्नु गलत नहोला । बातावरणले ब्यक्तिको मनोभाव प्रभाब पार्छ भन्ने सर्बमान्य कथनलाइ मान्ने हो भने दुखी बातावरणको प्रभाव संलग्न सेवा प्रदायकलाई त पर्छ नै । के त्यसैले होला त “ डाक्टरलाई घायल आत्माहरु ” भनिएको ? स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो भनेर सानैदेखि पढ्दै आएको कुरा । अहिले आफ्नै सामु साक्ष्यात्कार गर्न पाइन्छ । देख्न पाइन्छ । अनुभुती गर्न पाइन्छ । त्यसैले किटानका साथ भन्न सक्छु ” स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो । “ अस्वस्थ हुँदा धनका बिभिन्न मुहारको दर्शन गर्न सकिन्छ । धनको दयावान रुप । धनको क्रुर रुप । धनको कुटिल रुप अादि । कुनै देवनागरी लिपिकै भाषा ह
गुन्द्री फाल्दिने डाक्टर
गुन्द्री फाल्दिने डाक्टर हल्का आँखा राता छन् । निद्रा नपुगेको छर्लङै अनुहारमा देख्न सकिन्छ । आँखा टल्पल पनि छन् । धेरै दिनको थकानले शरीर गलेको देखिन्छ । इस्टकोट धुने ब्यबस्था मिलेको देखिन्न । आँसु जसोतसो थामिएका छन् । खस्दा होलान् कतै एउटा कुनामा । सबैको सामु खस्न मर्द हुनुको मर्यादाले नदिएको होला । मनको बेग त आँखामा झल्किन्छन् नै । भाद्गाउँले टोपीमा दुइटा खुकुरीका बुट्टा एक आपसमा क्रस गरेका छन् । ती कुदिएका खुकुरीका चित्रले जिन्दगीका बिभिन्न परिबन्धको निर्णय जस्तै संकेत गर्न खोजेको प्रतित हुन्छ । निर्दोष चेहरा, शान्त स्वभाव र सरल जीवन उनका बिशेषण हुन । नेपालको बिकासको नक्सामा नअटाएको कुनै पश्चिमको कुनाबाट आएका छन् आफ्नी जहानको उपचार गर्न । आफ्नी जहानको मृत्‍युको दोसाँधमा निर्णय गर्न उनलाई भनिएको छ । मेसिनमा राख्ने कि अवस्था गम्भिर तथा क्षिण भएका कारण घर लिएर जाने । कति अमानवीय र सम्बेदनाहीन मानेका होलान् ति बुवाले मेरा शब्दहरु त्यतिबेला ! हरेक दिन घटनाक्रममा कठिन निर्णय लिने गरिन्छन् । त्यसको साक्षात्कार गर्दै बिभिन्न परिस्थितीहरु
चिडियाको सकसको अन्त्य
चिडियाको सकसको अन्त्य आज सबै सकसको अन्त्य भयो । सबै पीडाको अन्त्य भयो । आफ्नै मनले सम्म धोका दिएको संसारमा सबै दु:ख र पीडाको इती श्री भयो । चिडियाको अमर तर अकथित आत्मा चिडियाजस्तै उडेर शायद स्थानान्तरण गरेको हुनुपर्छ । चिडियाको पार्थिब शरीरबाट दिक्क भएर । उर्जाबिहिन मन र तङ्रिन नखोजेको शरीरको अवस्थामा आत्मा एक्लो परेछ शायद । त्यसैले प्राणवायु खिचेर तानेर आँफैसँग लग्यो । र छुट्कारा पायो १२७ औँ दिनमा । निकै सकसका साथ छुट्कारा पायो तेस्रो पटकको अप्रेसनपस्चात । चिडियाको हारेको मन र कुपोषित शरीरले चिकित्साशास्त्रका सबै प्रयासहरु बिफल हुन पुगे । ओझेलको पात्र चिडियाको एउटा सकसको कथा कसैलाई थाहा नहुने गरी अन्त्य भयो । यस्ता त समाजमा हजारौ पात्र होलान् । सम्झना छ अझै मलाई । ४ महिना अगाडि एमर्जेन्सि ड्युटिमा ” एउटा बेड छ । कसलाई लिएर जाम ।” भनेर भन्दै थिएँ । त्यो सुनेर सिस्टरले सपाट उत्तर दिनुभएको थियो “ चिडियालाई लिएर जानुस् । “ एमर्जेन्सिमा आफ्नै होस् गुम्नेजस्तो भिड हुन्छ । एउटा कुनाको बेडमा टुसुक्क बेडमा बसेकी एउटी अन्दाजी ३० बर्षकी महिला । पूरानो मैलो
एउटी बिरामी हजुरआमाको गन्थनमन्थन ।
Make your destiny. Or else someone will hire you to make theirs. एउटी बिरामी हजुरआमाको गन्थनमन्थन । म त बुढी मान्छे । धेरै बर्ष बितेछन् । नागरिकता बाँड्ने बेला उमेर घटाइदेछन् । नत्र त ९० सालको भूकम्प जाँदा म ५ बर्षकी थिएँ । जीवन पूरै बितिसक्यो । बाल्यकाल देखि आजसम्म संसार धेरै नियालियो । बालबच्चा भए । नातिनातिना पनि भए । घर गृहस्थीको सबै कर्म गरिसकेँ । अक्षर भने लुकी लुकी कपुरी “क “सम्म चिनेकी थिएँ । अहिलेजस्तो पढ्न त कहाँ पाइन्थ्यो र । अहिले जवानी सकिनेबेलासम्म पढिरहनुपर्ने ! मेरो नातिनीको उमेरमा पछ्यौरामा बच्चा बोकेर घाँस काट्थेँ । ति दिन गए। संसारले धेरै फड्को मारेछ । कहिल्यै बिरामी परेको थिएन आज मनिटरका कर्कश आवाजका बीचमा अन्तिम दिनहरु पर्खेर बसेकी छु । बेड त गजबको छ । कमलो लचकदार बेड । न्यानो कोठा । तर जस्तो सुबिधा भएपनि ज्यानलाई सुबिस्ता भने छैन । हातैभरी निलडाम मात्रै । सुइले नचुमेका नशा कुनै बाँकी छैनन् शायद । कति तीखा सुइ । च्वास्स पार्ने । फेरि सुइ तीखो नभए इन्जेक्सन नशाभित्र कसरी पुग्ला र । रगत जाँच गर्दागर्दै शरीरको रगत नै रित्त
Make your destiny. Or else someone will hire you t...